15 Egwuregwu Halloween iji nwee oge egwu | Crafts On
15 Egwuregwu Halloween na -atọ ụtọ
Isabel Katalan | 14/10/2021 18:00 | Ọrụ aka Halloween, Crafts maka ụmụaka
Halloween na -abịa, oge eruola ka ị dịrị njikere ime ụdị n'ụdị! Kedu maka iji ohere mee ụfọdụ Ọrụ aka Halloween supergirls nke a ga -eji chọọ ụlọ ahụ mma ma kporie ndụ? Na post a anyị na -enyocha ụfọdụ ọrụ aka mbụ iji mee ezumike ndị a. Ị gaghị agbaghara ya!
1 Bat clip na nhọrọ ndị ọzọ iji mee ememme Halloween n'afọ a
2 Amoosu gbaruru n'ọnụ ụzọ - ọrụ nka Halloween dị mfe
3 Broom nke amoosu
4 Nwa nwamba nwere kaadiboodu
5 Ihichapu chọkọletị maka Halloween
6 Nwa kaadiboodu ojii maka Halloween
7 Halloween okpu ọma ka ya na ụmụaka
8 Nnukwu anụ anụ inye swiiti na Halloween
9 Mfe Halloween mummy ka ya na ụmụaka
10 Onye na-ejide ọkụ kandụl dị ka mummy
11 Funny lolly ruo maka Halloween
12 Ọfụma maka Halloween
13 Bọọlụ kaadiboodu mara mma
14 Cat maka halloween
15 Obere amoosu maka Halloween
Bat clip na nhọrọ ndị ọzọ iji mee ememme Halloween n'afọ a
Anyị na -amalite na nke a mwekota bat, otu n'ime ọrụ nka Halloween dị mfe nke ị nwere ike jiri ngwa ụfọdụ ị nwere n'ụlọ kwadebe ngwa ngwa dịka akwa akwa osisi, akara ojii, kaadiboodu ojii, mkpa, anya maka nka na egbe silicone.
Ị nwere ike iji obere ụyọkọ bat a dịka ọmụmaatụ ka a kpọgidere ya na ákwà ngebichi nke ụlọ, ịkwụdo uwe n'ahịrị akwa ma ọ bụ chọọ akwụkwọ ndetu mma, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Na post Bat clip na nhọrọ ndị ọzọ iji mee ememme Halloween afọ a ị ga -ahụ ntuziaka ka imere ha.
Amoosu gbaruru n'ọnụ ụzọ - ọrụ nka Halloween dị mfe
Otu n'ime ndị amoosu bụ otu isiokwu metụtara na mmemme Halloween. Ọ bụ ya mere enweghị ike ịpụ na listi a. M na -eweta otu n'ime ihe omume Halloween na -atọ ọchị nke ị nwere ike ịkwadebe n'oge a na nke ị nwere ike iju ndị ọbịa gị anya ma ọ bụrụ na ị na -eme oriri n'ụlọ. Ihe m na -ekwu bụ ihe ọchị ọphu ọphu etsoje ụzo, otu n'ime ọrụ aka dị mfe ịme n'ụlọ.
Ị ga -achọ naanị akpụkpọ ụkwụ na sọks, ihe fụkọrọ afụ na ihe mgbochi ụzọ. Iji hụ ka esi eme ya ana m akwado ka ị gụọ post ahụ Amụrụ amoosu n'ọnụ ụzọ ebe ị ga -ahụ nzọụkwụ site na nkwụsị.
Broom nke amoosu
Ihe ịchọ mma ọzọ nke na -agaghị efu efu n'ụlọ iji mee ememme a dị mkpa bụ ọzịza amoosu. Ọ bụrụ na ịchọrọ imetụ aka ọzọ na mma ụlọ, ana m atụ aro ka ịmegharịa nke a Broom nke amoosu nke ị gaghị achọ ọtụtụ ihe. N'ezie, naanị ihe ị ga -eme bụ ijide alaka ole na ole na ụfọdụ rịbọn iji kekọta ha ọnụ. Nke ahụ dị mfe!
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ka esi eme ya nke ọma, ana m adụ gị ọdụ ka ị gụọ post ahụ Broom nke amoosu iji chọọ mma na Halloween.
Nwa nwamba nwere kaadiboodu
Anụ ụlọ ọkacha mmasị nke ndị amoosu enweghị ike ịpụ na ndepụta nka nka Halloween a. Ọ bụ kpochapụwo na ụmụaka ga -enwe mmasị isonye na ịchọ ụlọ mma site n'ime ka ọ dị mma nwa nwamba na ha nwere ike idobe n'ime ụlọ ha. A na -eme ya na jiffy ọ dịkwa mfe. Na mgbakwunye, ekpughere ya nke ọma n'akụkụ broom nke m na -egosi gị na nka gara aga.
Dị ka ihe, ị ga -ewere obere kaadiboodu na agba ọzọ masịrị gị, anya nka, gluu na mkpa. Ị nwere ike ịhụ ka esi arụpụta ya na post Nwa nwamba nwere kaadiboodu. Ị ga -ahụ ya n'anya!
Ihichapu chọkọletị maka Halloween
Ụmụaka hụrụ swiiti na chọkọletị n'anya. Halloween bụ oge dị egwu iji mee ka echiche gị na -agba ọsọ ma kwadebe swiiti nwere ụdị dịka isiokwu ahụ siri dị. Dịka ọmụmaatụ nke a vampire anya wrapping iji gosi ụfọdụ chọkọletị. Ị ga -eju ma ụmụaka ma ndị okenye anya!
Nke a bụ otu ọrụ aka Halloween nke ị gaghị achọ ọtụtụ ihe maka ya. Kaadị ojii na maroon, anya nka, mkpisi gluu, mmanya chọkọletị na mkpa ga -ezu. Nke ahụ dị mfe! Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ ka esi eme ya site na nkwụsị, echefula post ahụ Ihichapu chọkọletị maka Halloween.
Nwa kaadiboodu ojii maka Halloween
Ihe ọzọ a na -ahụkarị nke ụwa Halloween bụ ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na ị na -akwadebe ọtụtụ ọrụ aka Halloween maka afọ a, nke a agaghị efu na listi gị! Ọ bụ a kaadiboodu ojii dị mfe ịme na ime ya ị gaghị achọ ọtụtụ ihe, naanị obere kaadiboodu ojii, pensụl, nchicha, ajị ọcha, anya nka, gluu, mkpa na teepu.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmata nke ọma ntuziaka nka a, ana m akwado ka ị gụọ post a Mama kaadiboodu ojii maka Halloween.
Halloween okpu ọma ka ya na ụmụaka
Ọ bụrụ na ị na -achọ nka Halloween n'ihi na ị na -eme atụmatụ ịme oriri, okpu a ga -enyere gị aka icho mma ụlọ ebe ị ga -eme ya. Ọ dị mfe ịme yana dị mma maka ụmụaka isonye na imekọ ihe ọnụ nke ihe oriri.
Ihe ndị ị ga -achọ iji kwadebe nke a okpu ifuru Ha bụ akwụkwọ iwu ojii na oroma, teepu, pensụl, mkpa, nchicha, na ụfọdụ eriri ọcha. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ka esi eme ya, egbula oge ịpị post ahụ Halloween okpu ọma ka ya na ụmụaka ebe ahụ ị ga -ahụ nkọwa nkọwa site na nzo.
Nnukwu anụ anụ inye swiiti na Halloween
Ụzọ ọzọ ị ga-esi eju ụmụaka anya n'oge ememme Halloween bụ site n'ime na kesaa obere ngwugwu a mara mma nke nwere candies. Ha ga -ahụ ya n'anya! Ha onwe ha nwere ike isonye na nkwadebe ya ma nyefee ha ndị ọbịa ndị ọzọ n'oge oriri ahụ.
Iji mee nke a ngwugwu swiiti nnukwu anụ Ị ga -achọ naanị ihe ole na ole: kaadiboodu sitere n'akwụkwọ mpịakọta mposi, anya nka, akwụkwọ na -ewu ụlọ nwere agba, mkpa, na egbe ọkụ na -ekpo ọkụ. Chọpụta ka esi eme ya na post Nnukwu anụ anụ inye swiiti na Halloween.
Mfe Halloween mummy ka ya na ụmụaka
Mama a bụ otu n'ime ihe osise Halloween dị mfe nke na ọbụna ụmụaka nwere ike ịme ya n'onwe ha. Ha ga -etinye oge dị ụtọ na -eme nke a mummy iji chọọ ụlọ gị mma ma ọ bụ akụkụ ọ bụla ọzọ nke ụlọ ahụ.
Iji mee nka a, ị nwere ike iji ụfọdụ ihe ị nwere n'ụlọ site na nka ndị ọzọ gara aga, dị ka katọn akwụkwọ mposi, anya a na -ebugharị ebugharị, mpịakọta eriri ọcha, mkpa, pensụl na obere teepu. Iji hụ ka esi eme ya, echefula post ahụ Mfe Halloween mummy ka ya na ụmụaka.
Onye na-ejide ọkụ kandụl dị ka mummy
Iji chọọ ime ụlọ mma ma nye ya mmetụ mmụọ, gịnị ka ị chere maka ịme ihe njide kandụl a dị mma n'ụdị mummy?
Ọ bụ otu n'ime ihe ịchọ mma Halloween kachasị mma ma dị mfe ịkwadebe. Dị ka ihe maka nke a ihe ndọba oriọna Ị ga -enweta ite iko, bandeeji, ụfọdụ kandụl, anya nka na egbe ọkụ na -ekpo ọkụ. Nke ahụ dị mfe! Iji hụ ka esi eme mummy a, lelee post a Onye na-ejide ọkụ kandụl dị ka mummy.
Funny lolly ruo maka Halloween
Nke a bụ otu n'ime ọrụ nka Halloween kachasị mfe iji soro ụmụaka kwadebe. Nke mbụ, ha ga -eri popsicles ole na ole ma were mkpara fọdụụrụ ha nwee ike ịkwadebe ihe ọchị a mara mma ogologo anụ. Ha ga -enwe ọfụma n'ezie!
Ihe ndị ọzọ iji mee nka a bụ anya na -akpụ akpụ, gluu, mkpa, ekworo, eriri ọcha, akara akara. Ị nwere ike ịhụ ka esi eme ya na post Funny lolly ruo maka Halloween.
Ọfụma maka Halloween
Omuma nke na -agaghị efu na oriri Halloween ọ bụla bụ akpa isiokwu popcorn. Nke a dị n'ụdị ọkpụkpụ. Ọ dị mfe ịkwadebe ha, maka nke a ị ga -achọ popcorn ole na ole, akwụkwọ mpịgharị, ụta iji kekọta ngwugwu yana akara ojii iji tee okpokoro isi.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ka esi eme ya site na nzọụkwụ ana m adụ gị ọdụ ka ị gụọ post ahụ Ọfụma maka Halloween. Ị ga -akwado ha n'oge adịghị anya!
Bọọlụ kaadiboodu mara mma
Ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ kaadiboodu abụọ na -apụta n'ụlọ ma ịchọrọ iji ha mee ihe nka, ọ mara mma kaadiboodu bat Ọ bụ ezi echiche iji chọọ ụlọ mma. Jiri akwụkwọ iwu ojii, ọcha, odo na -ewu ihe, mkpa, gluu, akara na obere ntụ ntụ. Nsonaazụ ga -adị mma!
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ ka esi eme ya, pịa na post Bat na-atọ ọchị iji mee ụmụaka na Halloween.
Cat maka halloween
El nwa nwamba Ọ bụ anụmanụ nke ejiri mara Halloween ma na -enye ọtụtụ egwuregwu iji chọọ oriri ụdị a mma. Ọ bụrụ na ị hụrụ anụmanụ ndị a n'anya, nke a bụ nka ị ga -eji nwee ọmarịcha ime ya. Ọ naghị esiri ike ịme mana ọ chọrọ ị attentiona ntị na nkọwa iji mee ka ọ yie ihe zuru oke.
Iji mepụta ya ị ga -achọ ihe ole na ole (kaadiboodu nwere agba, pensụl ojii, kompas, ihe nhicha ọcha abụọ, mkpa, pensụl, akara ojii, wdg) mana ọ bụ otu n'ime nka Halloween nke ị ga -eji nwee oge kacha mma. Na mgbakwunye, ị nwere ike kpọgidere ya ebe ọ bụla n'ime ụlọ iji mee ka ọ dị mma yana ọbụna n'ọnụ ụzọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ndị ọzọ na vidiyo na -egosi etu esi eme nwamba a site na nzọụkwụ, lelee post ahụ Cat maka halloween.
Obere amoosu maka Halloween
Na Halloween ị gaghị agbaghara okpu amoosu! Ị nwere ike ime ya n'ụlọ site na iji ihe ndị echekwara n'oge ndị ọzọ, ụmụaka ga -enwekwa mmasị isonye na usoro nrụpụta n'ihi na nka a dị nfe ime.
Iji mee nke a amoosu okpu Na ihu frog ị ga -achọ naanị ihe ole na ole: kaadiboodu ojii, rọba ụfụfụ na agba dị iche iche, pensụl, mkpa, kompas na ụfọdụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmata ihe ndị ọzọ na ntuziaka iji mee okpu amoosu a na -atọ ọchị, echefula post ahụ Obere amoosu maka Halloween. Ọ ga -abụ otu n'ime mmemme Halloween nke ụmụaka ga -enwe mmasị na ya!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Crafts maka ụmụaka » 15 Egwuregwu Halloween na -atọ ụtọ
Ololo vintage iji chọọ mma